GitHub Copilot, anoshanda ekuchenjera mubatsiri wekunyora kodhi | Kubva kuLinux
GitHub Copilot, anoshanda ekuchenjera mubatsiri wekunyora kodhi
GitHub yakaratidzwa mazuva mashoma apfuura basa idzva rinonzi «GitHub Copilot»Izvo zvinofanirwa kuita kuti hupenyu huve nyore kune mapurogiramu uye sezita rezita rebasa iri, iri mukutarisira kuongorora kodhi newe, ndiko kuti, inopihwa wizard yakangwara inokwanisa kugadzira zvakajairika kuvaka kana uchinyora kodhi.
Iyo system yakagadzirwa mukubatana pamwe neiyo OpenAI chirongwa uye inoshandisa iyo OpenAI Codex muchina wekudzidza muchinda, inodzidziswa mumhando dzakasiyana siyana dzemakodhi akaunganidzwa munzvimbo dzeveruzhinji dzeGitHub.
Nhasi, isu tiri kuburitsa tekinoroji yekutarisa ye GitHub Copilot , nyowani AI vaviri programmer iyo inokubatsira iwe kunyora iri nani kodhi. GitHub Copilot inotora mamiriro kubva kune iyo kodhi iwe yauri kushanda pairi, ichiratidza yakazara mitsara kana yakazara mabasa.
GitHub Copilot inosiyana nekodhi yekupedzisa masystem yechinyakare nekuda kwekugona kwekuumba yakaoma yakaoma kodhi mabhuroko, kugadzirira-kwakagadzirwa mabasa akagadzirwa achitarisa mamiriro azvino. Sezvo Copilot ibasa reAI iro rakadzidza kuburikidza nemamirioni akati wandei emitsetse yekodhi uye inoona izvo zvauri kuronga zvichienderana nedudziro yebasa, nezvimwe.
Semuenzaniso, kana iwe uchida kugadzira basa iro ma tweets, Copilot anozozviziva uye nekuratidza kodhi yebasa rese, nekuti pakave paine zvakakwana programmers zvisati zvato nyora basa rakadai. Izvi zvinobatsira nekuti zvinokuchengetera dambudziko rekutsvaga mienzaniso mune mamwe makodhi mapikicha.
Iyo inokubatsira iwe nekukurumidza kuti uwane dzimwe nzira dzekugadzirisa matambudziko, kunyora bvunzo, uye kuongorora maAPIs matsva pasina kuomesa zvine mutsindo kutsvaga kweInternet mhinduro. Sezvaunonyora, zvinoenderana nenzira yaunonyora kodhi, kuti ikubatsire kupedzisa basa rako nekukurumidza.
Mumwe muenzaniso, ndewekuti kana paine muenzaniso wechiumbwa cheJSON mune chirevo, paunotanga kunyora basa kuratidza ichi chimiro, GitHub Copilot ichapa kunze-kwebhokisi kodhi, uye kana mushandisi achinyora achidzokorora rondedzero enumumu enum ichaumba zvinzvimbo zvasara.
Nezve izvi tinogona kunzwisisa kuti GitHub Copilot inoenderana nenzira iyo musimudziri anonyora kodhi uye achifunga nezveAPIs uye masisitimu anoshandiswa muchirongwa.
Zvinoenderana neGitHub, iri "zvakanyanya kugona kupfuura kugadzira GPT-3 mukugadzira kodhi." Nekuti yakadzidziswa pane dhatabhesi iyo inosanganisira yakawanda yeruzhinji kodhi kodhi, OpenAI Codex inofanirwa kuve nekuziva zvakanyanya nezvekuti vanogadzira vanonyora sei kodhi uye vanokwanisa kuendesa zvakaringana dhizaini.
OpenAI Codex ine ruzivo rwakazara rwekuti vanhu vanoshandisa sei kodhi uye inonyanya kugona kupfuura GPT-3 mukugadzira kodhi, muchidimbu nekuti yaive yakadzidziswa pane seti yedhata iyo inosanganisira kukwirira kwakanyanya kwekodhi yekodhi yeruzhinji.
Mune ramangwana, zvakarongwa kuwedzera huwandu hwemitauro yekusimudzira inotsigirwa uye masystem. Basa repulagi rinoitwa nekusheedza sekunze sevhisi inomhanya kudivi reGitHub, uko, pakati pezvimwe zvinhu, zviri mukati mefaira rakagadziriswa nekodhi rinotamiswa.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kutaurwa kuti pfungwa yechinhu icho chiri chaicho otomatiki kodhi yekupedzisa inoenderana nehungwaru hwekunyepedzera haisi nyowani, nekuti semuenzaniso Codota naTabnine vanga vachipa chimwe chinhu chakafanana kwenguva yakareba, pamusoro pekubatanidza zviitwa zvavo uye zvekupedzisira mwedzi ivo vakabvumirana kuna Tabnine sechiratidzo chikuru.
Tinogona zvakare kutaura Microsoft iyo ichangobva kuburitsa chinhu chitsva, Power Apps, iyo inoshandisa iyo OpenTI GPT-3 mitauro yemhando kubatsira vashandisi kusarudza mafomura akakodzera.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa iyo ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » GitHub Copilot, anoshanda ekuchenjera mubatsiri wekunyora kodhi
WhyNotWin11: App kuratidza kana PC yedu yakakodzera Windows 11
Mushure mekutengwa kweAudacity, iyo app iko zvino inobvumidza kuunganidzwa kwedata kuti vabatsirwe nezviremera zvehurumende